VoIP . . MPT ဘာလဲ ၊ ဘယ်လဲ . . . — MYSTERY ZILLION
369 Mobile Devlopment
128 other mobile
VoIP . . MPT ဘာလဲ ၊ ဘယ်လဲ . . .
နိုင်ငံတကာမှာ အစက ဖုန်းစနစ်ပေါ်ကနေ Internet ကို အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ Dial up တို့၊ အခုကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ CDMA 800 MHz တို့ လိုမျိုးပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲဒီစနစ်ဟာ စျေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုအပါအ၀င် လိုအပ်ချက်တွေ တွေ့လာရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဖုန်းစနစ်ပေါ်က Internet အသုံးမပြုတော့ဘဲ Internet စနစ်ကြီးပေါ်ကနေ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို အသုံးပြုတာကို Voice Over Internet Protocol (VoIP) လို့ အကြမ်းဖျင်းသပ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ User တစ်ယောက်ဆီကို ဖုန်းလိုင်းတစ်ခုမပေးတော့ပဲ Internet လိုင်းတစ်ခုရအောင် လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒီ ရရှိလာတဲ့ Internet ပေါ်ကနေ မိမိ၀ယ်ယူထားတဲ့ VOIP service မှ Account ကို အသုံးပြုပြီး အဲဒီရရှိတဲ့ ဖုန်းနံပတ်တစ်ခုနဲ့ ကမ္ဘာတစ်၀န်းကို ဆက်သွယ်အသုံးပြုလို့ရရှိလာပါတယ်။ ဥပမာ . . မနေ့တနေ့က MPTကချပေးနေတဲ့ McWill ဖုန်းတွေလိုမျိုးပေါ့။ (ဒါပေမယ့် McWill ဟာ VoIP ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အသုံးချနိုင်စွမ်းတွေ အပြည့်အ၀မရရှိပါဘူး။) VoIP ဟာ Internet ပေါ်ကနေ အသုံးပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Global ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Internet ရှိတဲ့ ဘယ်နေရာကမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံက VoIP ဖုန်းကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံက အသုံးပြုလို့ရတယ်။ အမေရိကန်က VoIP ကို မြန်မာနိုင်ငံကလှမ်းသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေပြီး စျေးနှုန်းသက်တဲ့ Service ရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒါဟာ VoIP ရဲ့ အနှစ်သာရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အများပြည်သူတွေ စျေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တာကို MPT က ယခုတော့ ပိတ်ပင်လိုက်ပါပြီ။ ဒါဟာ ပြည်သူ့မျက်နှာကို တစ်စက်မှ မကြည့်ဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်မှာ အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချပါတယ်။ VoIP တွေ ပိတ်တယ်ဆိုရင် MPT က အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ McWill ဆိုတဲ့ VoIP စနစ်ကြီးကိုလည်း ပိတ်ပစ်လိုက်ပါလား။ အဲဒါတော့ မပိတ်ပါ။ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုလို့ ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် ေ၀ဖန်နေရရင် ပြီးမယ်မထင် . . .
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ ?
ဘယ်လို တုန်ပြန်ကြမလဲ ?
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ PAC တွေ စုစည်းပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုစေချင်ပါတယ်။ ရတယ် မရဘူး အသာထား လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဆင်မပြေတာကို အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း သူတို့ကို တင်ပြသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။. . VoIP ကို တရား၀င်ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးဖို့ ၊ VoIP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အခါ အခတ်အခဲများစွာ ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆိုင်ဆက်လက်ရပ်နိုင်ရန် ခတ်ခဲလာတဲ့အထိ ရင်ဆိုင်ရကြောင်း . . . . . စတဲ့ စတဲ့ . . သင့်တော်ရာ အချက်အလက်လေးတွေနဲ့ MPT သို့ ပေးပို့စေလိုပါတယ်။
(ဖတ်မိတဲ့သူများလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးတွေ ရေးသားစေလိုပါတယ်။)
အင်းဟုတ်တယ် သူတို ့လုပ်ချင်တာပဲလုပ်နေတော့တာပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်သုံးရတာ အရမ်းမောရပါတယ် ဟို site ပိတ် ဒီ site ပိတ်
ဒီကြားထဲ connection ကမကောင်း လိုချင်တာတစ်ခုရဖို့ ဟိုကျော်ဒီခွ အားလုံးပြီးတဲ့အခါ ၄ ၅ နာရီလောက်ကြာသွား မျက်စိတွေလည်းပျက် ကြာရင်
ငါ့မြင်းငါဆိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် ဆိုသလို....
စစ်ကိုင်းရောက်တော့လဲ ထုံးသင်္ကန်း ဖွေးဖွေးနဲ့ ကောင်းမှုတော်စေတီကြီးလဲ ရွှေသင်္ကန်းနဲ့ ယတြာ ချေတာခံလိုက်ရပြီပဲလေ...
၅ မိနစ် အမြန် ကျင်းပတဲ့ ၀စီပိတ် လွှတ်တော်ကြီးမှာလဲ
ဘယ်အမတ်တွေက ဘာတွေများ အဆိုတင်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့လဲဗျာ...
အစကတည်းကိုက ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ တရစ်ချင်း ကျပ်ချင်းတိုင်း ကျပ်လာခဲ့တာ
အခုကြမှ ကိုယ့်လည်ပင်းက ကြိုးကွင်းကို ပြန်ဖြည်ဖို့တော့ သိပ်လွယ်မယ်လို့တော့ မထင်မိပါ ခင်ဗျား
အခါအားလျှော်စွာ ထုတ်ပြန်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာပါ့မယ် လို့ ရေးထိုးထားရတဲ့ လက်မှတ်တွေကို ပြန်လည်သတိရကြပါခင်ဗျား (လည်ပင်းက ကြိုးကွင်းတွေလေ)
နောက်ပြီး စာမှာပါတဲ့အတိုင်း VOIP ခေါ်ဆိုမှုတွေကိုစျေးလျှော့ပြီးအပြိုင်အဆိုင်ဆွဲခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောထားတာတွေ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေစျေးသက်သက်သာသာနဲ့သုံးကြရတာကို တော်တော်မနာလိုဖြစ်နေဒါဘဲ။ ဆိုင်တွေကတောင်းတဲ့စျေးတွေများနေရင်တောင် စျေးကိုအသက်သာဆုံးသုံးနိုင်အောင်လိုက်လုပ်ပေးရမယ့်အစား စျေးသက်သက်သာသာနဲ့သုံးခွင့်ရနေတာကိုတောင်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုတော.
တော်တော်ကိုစဉ်းစားစရာပါ... ကို့၀င်ငွေလျှော့လို့ သူများ၀င်ငွေကိုပိတ်ချင်တာ မစားရတဲ့အမဲ သေးနဲ့ပတ်ချင်တာပါဘဲ..။
ဖဆပလ ခေတ် က အမတ် ရဲ့ တူမ မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းတာကို သတိရပါတယ် .
အမတ်က သူ့ တူမ မုန့်ဟင်းခါး ရောင်းမကောင်းလို့ ဘေး က ဆိုင်တွေကို အားလုံး မရောင်းရ အမိန့်ထုတ်ပါတယ် .
စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတာ ဒါမျိုးမဟုတ်ပါ .
ကိုယ့် ထုတ်ကုန် ရောင်းကောင်းဖို့ အတွက် သူများထုတ်ကုန်ကို ပိတ်ပင်ခြင်းအားဖြင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ မရှိတော့ ပါ . အဲဒါ နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တိုးတက်မှုဆိုတာလဲ ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါ .
တကယ်ယှဉ်ရဲတယ် ကိုယ့် ထုတ်ကုန် က တကယ် ကို အရည်အသွေးကောင်းတယ် . . ၀န်ဆောင်မှု မှာ လဲ ကောင်းတယ် စျေးနှုုန်းလဲ သင့်တင့် တယ် ဆိုရင် . ယှဉ်ရဲ ရမှာပါ . .
အားလုံးကို ပိတ်ပင် ပြီး ငါပေးတဲ့ ဟာကိုပဲ သုံး ဆိုတာက တော့ စီးပွားရေး ဦးနှောက် မရှိတဲ့ ခပ်ပေါပေါ ကောင်တွေ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် .
စစ်မှန်တဲ့ စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှု ကို ကျွန်တော် တို့ မရနိုင်တော့ တာက တော့ သေချာသွားပါပြီ .
အဲဒီလို ပဲ စစ်မှန်တဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ကို လဲ မရနိုင်တော့ တာ အခု လွတ်တော် သတင်းတွေ ဖတ်ရတာနဲ့ တင် သေချာသွားပါပြီ .
အဲဒီတော့ ပေးတာသုံး . သုံးရတာ အဆင်မပြေရင် လဲ ကြိတ်မှိတ်သုံး ရမှာပါ ပဲ .
ကျွန်တော်လည်း လက်မှတ်ထိုးပြီး တင်ပြသင့်တယ်လို ့ထင်ပါတယ်။ ဘာလို ့လဲဆိုတော့ ဒီလိုတင်ပြတာဟာ နိုင်ငံရေးလုပ်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အခက်အခဲကို တင်ပြခွင့်တော့ပေးမှာပါ။ အခါအားလျှော်စွာ ထုတ်ပြန်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာပါ့မယ် ဆိုပေမယ့် လက်မှတ်ထိုးပြီးတောင်းဆိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ MPT အနေနဲ ့လည်း အဲ့လိုဆိုရင် Pfingo, Skype တို ့နေရာမှာ အစားထိုးနိုင်မယ့် ပြည်တွင်းဖြစ်တစ်ခုလောက်တော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ရောင်းမကောင်းရင် သူများရောင်းကောင်းအောင် လုပ်တဲ့နည်းကိုအတုယူသင့်ပါတယ်။ ပိတ်ပင်ခြင်းကတော့ မကောင်းပါ။
kominmin wrote: »
လွှတ်တော်နဲ ့ပတ်သက်တဲ့ TV မှထုတ်လွှင့်ချက်တွေက တည်းဖြတ်ပြီးမှလွှင့်တာပါ။ တိုက်ရိုက်မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ တင်ပြသမျှကို ပြည်သူတွေအနေနဲ ့သိဖို ့ခဲယဉ်းပါတယ်။
They won't care what we do. They also do this to us. Instead of making people happy, they only care about their profit. Here are the things I can think of:
Cars - Brand new car Toyota Yaris cost thein 130. Exactly the same car in Myanmar cost Thein 850.
Internet - No low cost VoIP in Myanmar. Only Saudi and Myanmar block such services on the world. $900 or $1500 for setup fee??? really???
Phones - I cannot find any country that you have to pay $500 to useacellphone line.
Satellites - Forcing all the publics not to use satellites except their own Sky Net and MRTV-4 (5 series and balalabala) ဝါးတားတားပဲ.
States own properties - There are no other country that sells States own properties to privates! Including parks!!!
Sports - You know what happen to our football... Don't you feel like you just want to throw yourself into the game??
These are onlyafew things. There are soooooo much more and I'm sure you all know about it. But they will just say ဒါတွေကပါးပါးလေးပါ...
ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ PAC တွေ စုစည်းပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုစေချင်ပါတယ်။ ရတယ် မရဘူး အသာထား လူတစ်အနေနဲ့ အဆင်မပြေတာကို အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း သူတို့ကို တင်ပြသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။. . VoIP ကို တရား၀င်ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးဖို့ ၊ VoIP ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ အခတ်အခဲများစွာ ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ဆိုင်ဆက်လက်ရပ်နိုင်ရန် ခတ်ခဲလာတဲ့အထိ ရင်ဆိုင်ရကြောင်း . . . . . စတဲ့ စတဲ့ . . သင့်တော်ရာ အချက်အလက်လေးတွေနဲ့ MPT သို့ ပေးပို့စေလိုပါတယ်။
ဖစ်သင့်ပါတယ် PAC တွေအကုန်လုံး ဒီကိစ္စကို ကန့်ကွက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်.
မဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပညာရှင်တွေက သုံးတဲ့သူတွေအဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီးလုပ်ပေးထားတဲ့ အခမဲ့သုံးနည်းပညာတွေပါ။ ဒါတွေပိတ်လိုက်တော့ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ ထမင်းငတ်ကုန်မှာပေါ့။ ပြီးတော့ ဒါတွေက အင်တာနက်ဆိုတဲ့ လိုင်စင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာ အင်တာနက်ကိုပဲ အသုံးပြုပြီး ဘောင်အတွင်းမှ အသုံးချတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပါ။ PAC လိုင်စင်ကြေးပေးပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဆိုင်တွေမှာ တစ်နာရီကို ၃၀၀၊ ၄၀၀ ပေးပြီးသုံးတဲ့ user ဆိုတာကလည်း အင်တာနက်သုံးပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆက်သွယ်ချင်လို့ သုံးတာပဲဖြစ်မှာပါ။ Zuma ပစ်တာလောက်နဲ့တော့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို မလာလောက်ပါဘူး။ မြန်မာပြည် အင်တာနက် user တွေမှာ gtalk နဲ့ gmail မသုံးတဲ့ user မရှိပါဘူး။ ဒါကိုပိတ်လိုက်ပြီး အင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့ ဖုန်းတွေချပေးနေတော့ ဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲတော့ မသိဘူးလေ။ အင်တာနက်သုံး၊ အင်တာနက်ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း အိမ်ကနေ အလုံပိတ်ပြီးသုံးတာဟဲ့၊ သူများနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူး၊ ဆက်သွယ်ချင်ရင် တယ်လီဖုန်းရှိတာပဲ၊ ဒါနဲ့ပဲပြောဆိုတဲ့ သဘောကြီးလား မသိဘူး။ အိုင်တီစနစ်မှာ VOIP ဆိုတာ အလကားပေါ်လာတာတော့မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ရှုံ့ချပါတယ်။ ဘယ်လိုမှကို လက်မခံပါဘူး။
ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အခု မှ သတိပြုမိလို့ နည်းနည်း အာချောင်လိုက်တာပါ .
ဟိုတုနး် က စာပေ ေ၀ဖန်ရေးတွေ မှာ သုံးကြပါတယ် .
ထင်ရှားတာက ဆရာဖြိုးထိန် နဲ့ ဆရာမောင်စွမ်းရည် တို့ အပြန်အလှန်ပြောကြ ရင် သုံးကြတာကို အမှတ်ရပါတယ်
နောက် မော်ဒန်ကဗျာ ဘာလဲ ဘယ်လဲ .
အဲဒါ ကနေ နိုင်ငံရေးထဲ ရောက်တော့ . ငါးမင်းဆွေ ထင်ပါတယ် ဒေါ်စုဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုပြီး ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် ကို ဖတ်ဖူးပါတယ်
ဒါဖြင့် အခု MPT ဘာ လဲ . ဆိုတဲ့ ဟာမှာတော့ MPT က ဘာမှ မဟုတ်ပါ. အသုံး၀င်တာတွေကို ဘန်းပြီး အသုံးမ၀င်တာတွေ ကို ဖွင့်ထားတယ်
၀န်ဆောင်မှုပိုင်းမှာ သမခေတ်က အရောင်း၀န်ထမ်းတွေ ထက် သာပါတယ်
သူများတိုက်ခိုက်တာ ခံရတယ် ဆိုပြီး ရောချတယ် . တိုက်ခိုက်တဲ့ သူတွေ ကတော့ မေ့တောင် မေ့နေကြပါပြီ .
MPT ဘယ်လဲ . . . ဆိုတာမှာတော့ . နေမြဲ အတိုင်း ဆက်ပြီး ေ-ာက် အသုံးမကျသော နိုင်ငံတော်ပိုင် ၀န်ထုပ်၀န်ပိုးကြီး တစ်ခု အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေမှာပါ .
လောလောဆယ် တော့ သူ ကိုယ်ပိုင်ဆိုက် mpt.net.mm ဖွင့်မရပါ .